रोजगारी समस्यालाई समाधान गर्ने तीन उपाय
जनतापाटी डेस्क सोमवार, भदौ ९, २०७६, ०२:०१:०० मा प्रकाशित
भारतको रोजगारी क्षेत्र विडम्बनापूर्ण छ ।
बजारी क्षेत्र र शिक्षित यूवाहरुका माझबाट विकासित केही नयाँ विचारहरुले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सकिनेछ । अहिले यस्ता समस्याहरुको समाधान गर्ने बेला आएको छ ।
विद्यमान समस्याहरुलाई राजनीतिकरण गरेर सदाझैं एक अर्कालाई दोषारोपण गर्नु राष्ट्रका लागि घातक हुनसक्छ । राजनीतिमा हाबी यस्तो काम देशका लागि दुर्भाग्य हो । आजसम्म रोजगारी व्यवस्थापनमा भएका कामहरु राजनीतिक एजेन्डाका लागि मात्र हुन ।
रोजगारीको अभाव कसरी सिर्जना भयो भन्नेमा केही आफ्नै कारण छन् भने केही विश्वव्यापी कारणहरु छन् । जल्दबल्दो अवस्थालाई बुझेर हामीले समाधान गर्ने हो भने एउटा कुराले समाधान संभव छ – उच्च आर्थिक बृद्धिदर ।
समाधानका लागि हामीसँग सर्वप्रथम एकत्रित लक्ष्य हुन अनिवार्य छ । हामी यो लक्ष्यलाई जीडीपी १० अर्थात कूल गाह्रस्थ उत्पादन १० बनाउने गोलका रुपमा लिन सक्छौं ।
हाल सरदर ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हामीसँग छ । यसलाई १० प्रतिशत बनाउन चुनौतिपूर्ण त छ तर असंभव छैन । जीडिपी १० ठूलो संख्या त हो तर ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने साधन पनि यो नै हो । यसले शिक्षित सहरी यूवालाई सहजै रोजगारी दिलाउन सक्नेछ ।
हामीले यो विसाल लक्ष्य भेट्टाउन सक्यौं भने हाम्रो वेरोजगारी समस्या मात्र समाधान हुँदैन आर्थिक बृद्धिदर १० ले अरु थुप्रै फाइदा ल्याउन सक्नेछ ।
गुणस्तरीय जीवनयापन र प्रतिव्यक्ति आयमा बृद्धि जस्ता महत्वपूर्ण हिस्साहरु आर्थिक बृद्धिले लिएर आउँछ । यसले सरकारको कर बृद्धि हुन्छ । करको बृद्धिले कल्याणकारी कार्य गर्न सकिन्छ, बचत बढाउन सकिन्छ भने देशमा स्वदेशी लागत पनि बढ्छ । विदेशि लगानी पनि भित्रन्छ ।
वैदेशिक लगानी भित्रिनाले धेरै रोजगारीको सिर्जनासँगै गरीबीको रेखामुनी रहेका मानिसको संख्या घटाउन पनि सहयोग पुग्छ ।
यहाँ सरकारले गर्ने तीन काम र व्यक्तिले गर्ने तीन कामको व्याख्या गरिएको छ ।
कृषि उत्पादनको महत्व बढाउन कृषि क्षेत्रमा उच्च लगानी
जब हामी उत्पादन र व्यवसायको हब बन्छौं तब कच्चा पदार्थको उपलब्धताको पाटो कमजोर हुनेछ । हामीसँग प्राचुर मात्रामा कच्चा पदार्थ नै हुनेछैन तब कच्चा पदार्थको आपूर्ति गर्दै उत्पादनको निर्यात गरेर व्यवसायिकतालाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र उत्पादनलाई विश्वबजारमा बेच्न सफल बन्नेछौं ।
उदाहरणका लागि दुधबाट बनेको चीजलाई लिन सकिन्छ । चीजको बिक्री गर्नु दुुधको बिक्री गर्नुभन्दा धेरै फाइदाजनक हुन्छ । अझैसम्म पनि स्वीस चीज किन सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ ? हामी बुझ्न सक्छौं ।
उत्कृष्ट विमान वा टेलिकमको सामाग्री बनाउँन त सक्दैनौं तर राम्रो चीज त बनाउन सक्छौं नी । के हामी विश्वकै राम्रो चीज बनाउन सक्दैनौं त ? अथवा जाम ? के विश्वको खाद्य वस्तुमा क्रान्ति ल्याउन सक्दैनौं त ?
कृषि क्रान्तिका लागि उत्कृष्ट कृषि उद्योग र उत्पादनमा गुणस्तरीयता आवश्यक पर्छ । विश्वस्तरीय प्याकेजिङ र उपयुक्त बजार व्यवस्थापन सँगसँगै चाहिन्छ । सबै काम गर्न पूर्वाधारको व्यवस्थापन पनि राम्रो हुनपर्छ । साथै बजार व्यवस्थापकको मनोदसा पनि राम्रो चाहिन्छ ।
हालको परिप्रेक्षमा हामी सुन उत्पादन गरिरहेका छौं तर यसलाई टल्काएर बेच्न जानिरहेका छैनौं । हामीले साधारण तवरले उत्पादन गरिरहेका छौं । त्यसैले हाम्रो उत्पादन विश्व कृषि बजारमा राम्रो मानिएको छैन ।
हामीले आफ्नै सिंगापुर र हङ्कङ बनाउने
हङ्कङको उदाहरण आंसिक रुपमा सान्दर्भिक छ । पूँजीकरणले सम्पन्न इलाका हङकङमा उद्योग र व्यवसाका लागि उपयुक्त कानुनहरु छन् । त्यहाँ कडा कानुनको व्यवस्था छैन ।
चीनको अर्थिक बृद्धिमा हङ्कङले ठूलो टेवा पुर्याएको सहजै देख्न सकिन्छ । चाहे वित्तीय क्षेत्रमा होस् वा व्यापारिक र व्यवसायिक क्षेत्रमा नै किन नहोस हङ्कङ व्यापारिक हब साबित भएको छ ।
भारतमा हङ्कङजस्तो स्वतन्त्र बजारको अभाव छ । प्रान्त सरकार, स्थानीय र केन्द्रिय प्रशासनले सबै बजारलाई हस्तक्षेप गरेको छ ।
प्रशासनिक कामले विश्वस्तरिय बजारको निर्माण गर्न पनि बाधा पुगेको छ । हामीलाई कम्तिमा एउटा हङ्कङ अथवा सिंगापुर जस्तो सहर आवश्यक पर्छ ।
व्यवस्थापिकाको एक विशेष नियमले यस्तो सहरलाई स्वतन्त्रताका लागि सक्षम बनाउनु पर्छ । नियम – कुन पार्टी र मनसायको मानिस सत्तामा छ भन्ने कुराको आधारमा रहनु हुँदैन ।
व्यवसायिक कामका लागि कुनै विचलन नआउने प्रकारले कानुनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । बन्दरगाह सहितका सहर जस्तै वाइज्याक, कोर्चा, पोर्वान्डर र पोन्डिचेरी जस्ता सहर यस कामका लागि उपयुक्त छन् । यस्तो कामले देशको आर्थिक बृद्धिमा ठूलो सहयोग गर्छ ।
विश्वकै राम्रो एयरलाईन्स र एयरपोर्ट
यो एक सिमित र सम्भाव्य योजना हो । यसले रोजगारी मात्र दिँदैन विश्वकै ठूलो भीड भारतबाट गुज्रन सहयोग पनि गर्दछ । यसबाट व्यापार बृद्धि हुन्छ, बाह्य पर्यटन बढ्छ र विश्वका मानिसलाई भारतसँग जोड्छ ।
यसले आर्थिक बृद्धिदरको प्रभावलाई १–२ प्रतिशत भएपनि सहयोग पुर्‍याउँछ । साथसाथै, जीडिपी बृद्धिले नयाँ काम सिर्जनासमेत गर्छ । यसले भोलीको सीप र नोकरीमा नाटकीय परिवर्तन ल्याउँछ ।
तर, भोलीको नयाँ कामका लागि शैक्षिक गुणस्तर र नीतिमा व्यापक सुधार ल्याई नयाँ कोर्सको व्यावस्था गर्नुपर्छ ।
अबको २० वर्षपछि कस्तो प्रकारको काम र सीप चाहिन्छ आज कसैलाई थाहा छैन् । त्यो काम आजको भन्दा धेरै फरक हुनेछ । सायदै प्रविधि र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधिरित हुन सक्छ । त्यसैले हामीले सम्भावित क्षेत्रमा फोकस गर्नुपर्छ । यसलाई सहयोग पुर्‍याउने एउटा पक्ष हो – विदेशी विश्वविद्यालयलाई भारतमा प्रवेश गराउने ।
ग्लोबल विश्वविद्यालयको अनुभव र दक्षताले समयसँग हिँड्न सिकाउँछ ।
यदि तपाइँ रोजगारी अभावको चपेटामा पर्नुभएको छ भने यसबाट आफैंले पनि समाधान खोज्न सकिन्छ । माथि दिइएका समस्या ठूला समस्या हुन । यसलाई समाधान गर्नधेरै समय चाहिन्छ । त्यसैले छोटो समयमा समस्या समाधान गर्न यस्ता उपाय हुनसक्छ :
पहिले तपाइँले बजार चिन्नुपर्ने हुन्छ । यदि तपाइँलाई काम चाहिएको छ भने, काम गर्न चाहेको कम्पनीसँग संपर्गमा रहनुहोस् । सभा, सम्मेलनमा स्वयंसेवक गर्ने र कार्यक्रममा सहभागी हुनुहोस । धेरै मानिसहरुसँग भेटघाट गर्नुहोस् ।
तपाइँको मोवाइल भिडियो हेर्न र च्याट गर्नमात्र प्रयोग नगर्नुहोस् । फोनलाई नयाँ प्रविधिबारे जान्नको लागि प्रयोग गर्नुहास् । यसलाई सम्पर्ग बनाउने माध्यम बनाउनुहोस् – जसले तपाइँलाई काम दिलाउन सक्छ ।
विवाह खर्च कटौति गर्न अभिभावकसँग माग
चाहे विवाह जतिनै हर्ष उल्लासका साथ किन नहोस् मानिसले केहिदिनपछि भुल्छन् । अथवा कोहीले विवाहको इष्र्या पनि गर्छन् । विवाह गर्ने रकमले नयाँ व्यवसाय सुरुवात गर्न सहयोग गर्छ । त्यसैले विवाहको पैसा त्यतातिर लगाउनुहोस् ।
आफूलाई चाहिने सीप सिक्नुहोस्
रोजगारी बजार हेर्नुहोस र के–कस्तो रोजगारि आवश्क छ बुझ्नुहोस । विद्यालय र कलेजवाहेक पनि पढ्ने बानी गर्नुहोस् । आफ्नो समय रोजगार खोज्न लगाउनुहोस् साथै आफ्नो फोनमा एडिक्ट नहुनुहोस् ।
यस्ता विधिहरुको अवलम्बन गरेर हामी सबै मिली रोजगारी समस्याको समाधान गरौं ।
भगतले भारतका लागि यो लेख तयार पारेका हुन । तर समग्र दक्षिण एसियाको अवस्था उस्तै छ ।
नेपाल र भारत दुवै कृषिमा आधारित राष्ट्र भएकाले यी देशका समस्या उस्तै छन् । साथै समाधानका पाटा पनि एकै हुन्छन् । भगतले भनेजस्तो हामी कुनै कुराको हब बन्न सक्छौं ।
मक्का र मदिनामा बर्सेनी लाखौंको संख्यामा भक्तहरु जान्छन । यसले त्यहाँको पर्यटन बृद्धि गरेको छ हामी पनि हाम्रो पुण्यभूमि लुम्बिनीलाई अध्यात्मिक पर्यटनको हब बनाउन सक्छौं ।
त्यस्तै स्पेनमा गएको सिजनको ‘च्याम्पियन्स लिग फाइनल’ खेल हुँदा एकै दिनमा १५ सय ठूला विमान म्याड्रिडमा ल्याण्ड भएका थिए । यसले त्यहाँको पर्यटन बढाउन सहयो गरेको छ ।
खेललाई नै आधार नमान्ने हो भने पनि अन्य, जस्तै माउन्टेनियरिङ र कृषि उत्पादनको हब त बन्न सक्छौं नी । की सक्दैनौं ?
twitter : @beenay_sapkota
blog : beenayz.blogspot.com
समृद्धिको अनिवार्य सर्त सुशासन र असल कार्य संस्कृति मुलुकमा वर्षौंदेखिको अराजकता, छाडातन्त्र, अनुशासनहीनताका कारण मक्किँदै र खिया लाग्दै आएको सुशासन र समृद्धिको ढोका सहजै खोल्न भने कठिन देखिन्छ । त्यो ढोका स्थायी रूपमा खोल्न प्रधानमन्त्री ओली, उनका सारथी मन्त्रीहरू र ब्युरोक्रेसीको इमान आवश्यक पर्छ । मंगलवार, बैशाख १०, २०७६, १६:०७:००
सशस्त्रमा सेवा अवधि थप्ने र बढुवाका लागि धाउनेको ‘म्याराथन दौड’ गृहका अधिकारीहरु शनिवार सार्वजनिक विदाका दिन पनि मन्त्रालय गएपछि यसबारे झन् शंका बढेको छ । आइतवार, पुष १३, २०७६, १२:३५:००
'नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा आशा जगाएको छ' मंगलवार, बैशाख २४, २०७६, १३:०२:००